Wadahadal A la Betty Reardon, Peace Baraha - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[Oktoobar 30, 2021] South Sudan waxay bilawday 'Hagaaraha ku dhawaaqida Dugsiga Badbaadada' iyadoo taageero ka heleysa Save the Children si looga ilaaliyo dugsiyada isticmaalka militariga Warar & Muuqaal
Waxaa waday Katherine Marshall
Berkley Xarunta Diinta, Nabadda & Arimaha Adduunka - Jaamacadda Georgetown
(Maqaalka asalka ah: Xarunta Diinta, Nabadda & Arimaha Adduunka ee Berkley. Abriil 23, 2016)
Background: Betty Reardon waa hogaamiye dhab ah oo guru ah dhanka nabada waxbarashada, taas oo ay si guud iyo guud ahaanba u qeexeyso inay tahay wax aasaasi u ah waxbarashada bulshada ee aasaasiga ah sida caafimaadka bulshada ama dhaqaalaha shaqsiyadeed. Waxay ka shaqeyneysay sanado badan barashada ku lug leh barida mowduucyada la xiriira dhismaha adduun nabadeed; keydka Betty Reardon wuxuu ku yaal Jaamacadda Toledo. Wadahadalkan lala yeeshay Katherine Marshall bishii Abriil 23, 2016 (taleefoonka) wuxuu diirada ku saaray ajendaha koox hoosaad ay magacawday Wasaaradda Arimaha Dibadda Mareykanka oo ka shaqeynaya haweenka, diinta, nabadda, iyo amniga. Waxay sidoo kale baartay arrimo ballaaran oo ay ka mid yihiin xiriirka diimaha kala geddisan, hababka haweenka ee loo wajahayo iyo doorarka ka shaqeynta nabadda, iyo caqabadaha xilligan jira ee wacyigelinta muwaaddiniinta ee qaddarin kara kala duwanaanshaha iyo marinka adduunka oo aragtiyada kaladuwan ay yihiin qodob muhiim u ah nolosha maalinlaha ah.
Aynu ka bilowno caqabadaha wax ku oolka ah ee waxaad kula talin karto Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee ku saabsan mowduuca haweenka, diinta, iyo nabadda. Waxaad muujisay muhiimadda ay leedahay in la tixgaliyo dadaallada diimaha kala geddisan. Ma faahfaahin kartaa sababta iyo noocyada dadaallada aad maskaxda ku hayso?
Waxaan ku qanacsanahay in diimaha oo dhan, iyo waxa aan sidoo kale ugu yeero caqiido badan, dhaqdhaqaaqa uu aad muhiim u yahay. Taasi waa run run ahaan hadda, gaar ahaan Mareykanka, marka la eego Islaam nacaybka iyo rafcaanka ka saarista diinta ee ka muuqata ololayaasha siyaasadeed ee hadda socda. Muhiim maaha kaliya marka la eego cadeymaha waxa kooxahan diimaha kala duwan ay sameynayaan iyo waxa ay ku gaari karaan ereyo la taaban karo. Sidoo kale waa mudaaharaad ka dhan ah diidmada koox diimeedka in dhaqdhaqaaqyada ka saaritaanku isku dayayaan inay dadka ka dhaadhiciyaan inay tahay wanaag bulsho.
Dhisida dhaqdhaqaaqyo diimo badan iyo raadinta, sida ay ku sameeyaan macno aasaasi ah, waxa loogu yeero dhulka la wadaago ayaa muhiim ah. Taas macnaheedu maahan wax aad u badan oo la wadaago marka loo eego caqiidooyinka gaarka ah, laakiin waxa caqiidooyinkaasi u horseedaan inay qiimeeyaan bulshada, oo ka kooban diimo badan iyo caqiidooyin. Dadka hawshaas soo maray waxay ku qotomaan qiimayaal nabadeed oo togan. Waxay u arkaan kala duwanaanshaha caqiidooyinka inay yihiin isha laga helo kala duwanaanta, halkii ay sababi lahayd kala-jajabnaanta bulshada ama isku dhaca.
Anigu si toos ah ugama dhex muuqan ururada diimaha kala duwan hada, laakiin anigu waxaan ku lug lahaa waqti ka waqti oo aan aad ula socday. Waxaan leeyahay saaxiibo iyo asxaab ku lug leh iyo taageerayaasha dhaqdhaqaaqa. Waxaan u maleynayaa inay aad muhiim ugu tahay bulshadeena, taas oo ah bulsho cilmaani ah, in ficilka ku saleysan diinta uusan noqon mid kooxeed. Waxaan ku arkay waxyaabo burburin kara waxyaabo ku dhisan dariiqooyin diimeed sidaas darteedna waxaan culeyska saarayaa cabirka iimaanka badan. Tani waxay badanaa ku lug leedahay isu imaatinka arrin, siyaabo ka gudbi kara qodobbada kala duwanaanshaha ee duruufaha kale ku kala bixi kara halkii ay ku midoobi lahaayeen kooxo kala duwan. Dadka ku dhiirrigeliya inay ka wada hadlaan waxa guud ee laga wada hadlayo si loo xoojiyo dadaallada xagga nabadda iyo caddaaladda isla markaana ka wada shaqeeya ujeeddooyinka guud waxay noqon karaan kuwo waxtar badan leh.
Miyaad tusaale u soo qaadan kartaa?
Shaqada Golaha diimaha ee New York ayaa maskaxda ku soo dhacaya. Waxay ku lug leeyihiin meelo badan, oo ay ku jiraan booliska, wax ka qabashada Islaam naceybka, iyo rabshadaha ka dhanka ah haweenka. Waxay mararka qaarkood ku lug leeyihiin ficil toos ah. Tusaale ahaan waa muranka hareereeyay soo jeedinta ah in la horumariyo xarun bulsho oo muslimiin ah oo u dhow Ground Zero [soo jeedinta Park51]. Waxaa jiray daadad xoog leh oo iska caabin ah oo jeexjeexay nabarradii laga soo bilaabo Sebtember 11. Golaha diimaha kala geddisan ee New York ayaa door firfircoon ka qaatay wacyigelinta dadweynaha iyo ku adkaysiga ilaalinta xuquuqda walaalaha Muslimiinta ah. Markii ay jireen xayeysiisyada dhulka hoostiisa mara ee ka soo horjeedka muslimiinta iyaguna way ku lug lahaayeen oo waxay gacan ka geysteen xaqiijinta in xayeysiisyada wax laga beddelay. Waxaana golaha hogaaminaya haweeney, Rev. Chloe Breyer. Waxaa jira kooxo kale oo si isku mid ah u wada shaqo wanaagsan. Macbadka Isfahamka (oo ay aasaastay Judith Hollister) waa tusaale kale.
Waxaa xiiso ii leh in ujeedadan ku saabsan ogaanshaha iyo xitaa cibaadada dadka kale ay had iyo jeer ku jirtay dhaqdhaqaaqa nabadda. Markii ugu horreysay ee aan socodsiinnay barnaamijyada barashada nabadda xagaaga, qaarkood waxay deganaayeen dhammaadka usbuuca. Waxaan xasuustaa in inta badan kaqeybgalayaashu ay kulmaan, kaligood, oo ay soosaaraan nooc cibaado diimeed oo badan, siyaabo layaab ku noqon laheyd hogaamiye dhaqameedyo dhaqameed badan. Waxay ka tarjumaysay dhiirigelinta ka shaqeynta nabadda ee kaqeybgalayaashu ka heleen caqiidadooda diimeed iyo rabitaankooda inay helaan qaabab ay kula wadaagaan siyaabo macno leh.
Marka, in kasta oo ay jirto xaqiiqda ah in diinta loo adeegsan karo aalad abuur ama ka sii darista khilaafaadka, had iyo jeer waxaa jiray cunsurkan dhisidda nabadda ee wanaagsan ee udub dhexaadka u ah caqiidooyinka badankood. Marka loo isticmaalo xaalad ku habboon, waxay noqon kartaa mid wax dhisaysa.
Sidee haweenku ugu soo galaan sawirkan?
Waxaan dhawaan kala hadlayey Chloe Breyer khudbad ay ka jeedin laheyd kaniisada Episcopal ee ku taal magaaladeyda. Waxaan uga sheekeeyay khibradeyda shaqsiyadeed ee magaalada. Markii aan koray, kala-soocidda kooxaysigu aad bay u xoog badnaayeen. Ragga madasha fadhiya waxay nagala hadlayaan sida aan ula dhaqmayno kuwa kale, taas oo loola jeeday Brotestaanka kale iyo Katooliga. Waxay yiraahdeen waan noqon karnaa saaxiibtinimo laakiin laga yaabee inaanu noqonin kuwa saaxiibtinimo leh oo ugu fiican ee aannaan kuwa kale la caabudi karin; Subaxnimadii Axada waxay ahayd waqti kala tag. Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo macnaha rasmiga ah ee diinta, hooyooyinka bulshada waxay leeyihiin aragti gebi ahaanba ka duwan. Jiilkeyga, dhamaanteen waxaan tagnay xafladaha Kirismaska ​​ee diimaha kala geddisan, kuwanna badiyaa waxay ku jireen dabaqadaha hoose ee kaniisadaha. Waxaan xasuustaa waxbadan sidaan ugaga gudubnay xisbi kale. Waxaan mar ahaan jiray Shirley Temple ciyaarta Axadda ee kaniisad kale. Hooyooyinku waxay rabeen in dhammaan carruurtu ka mid noqdaan dhammaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ee ay u arkeen inay yihiin wada-hadal halkii ay ka ahaan lahaayeen koox-kooxeed. Waxay iska caabiyeen fikradaha kala-soocidda iyo ka-saarista ee aan ognahay inay yihiin astaamaha aabbeynta. Kuwani waxay ahaayeen haween aan waligood isku magacaabi karin haween.
Haweenka, intooda badani waxay ahaayeen kuwa guryaha dhisa, sidoo kale waxay lahaayeen dareenka bulshada ka shaqeeya. Intii lagu gudajiray sanadihii Murugada, waxay iska kaashadeen habab caawiyay qoysaska in laga taageero iskuulada iyo kaniisadaha. Waxay ahayd sanado kadib markaan aragno xaqiijinta xuquuqda haweenka ee xiritaanka iyo kaqeybgalka rasmiga ah ee hay'adaha, iyo in haweenka loo aqoonsan yahay inay yihiin hogaamiyayaal diimeed iyo jilayaal, laakiin dareenka aasaasiga ah ayaa jiray waqti hore. Marka wax la yaab leh maahan in dumar badani ay aad ugu lug leeyihiin nabad-doon. Haddii aad eegto dhaqdhaqaaqyada nabadeed ee ku wareegsan Qaramada Midoobay, Haweenka Methodist-ka ee United, haweenka ka socda Wada-tashiga Anglican, Baha'i, haween aan tiro lahayn oo ka socda amarrada haweenka Katooliga, iyo kuwa kale ayaa si firfircoon uga qaybqaata dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah ee nabadda iyo caddaaladda. Haweenku had iyo jeer waxay ahaayeen nabad-doon muhiim ah, laakiin hadda uun baa si rasmi ah loo aqoonsan yahay sida ku xusan Qaraarka Golaha Amniga ee 1325 ee Haweenka, Nabadda iyo Amniga (2000).
Milicsigaan ku saabsan Qaramada Midoobay wuxuu maskaxdayda u keenayaa sawir muuqda. Sannadkii 1995-kii Bejinga [shirkii Afraad ee Qaramada Midoobay ee Haweenka], ka dib dhacdooyinkii madasha bulshada rayidka ah, qaarkeen baa ku sii nagaaday inaan isku dayno inaan wax ka qabanno nabadeynta iyo u ololeynta xuquuqda aadanaha ee dalalka xubnaha ka ah shirka ka socda gobollada dhexe. Waxaan raadinayey saaxiibkay oo ka hawl gala NGO diimeed waxaanan u maleeyay inaan ka helo goob ay isugu yimaadaan ururro diimeed. Waxay noqotay inuu noqdo kulan ku saabsan xuquuqda haweenka, sidaan xusuusto, oo ay ka mid yihiin xuquuqda taranka, oo xilligaas muran badan ka taagnaa. Markii aan imid albaabku wuu xirnaa laakiin ma xirna, sidaas ayaan ku furay oo aan suulashaday. Waxa aan helay waxay ahaayeen xirmo badan oo madow ah. Waxay ahayd qol ay ka buuxaan dhammaan ragga, garka iyo kuwa aan gadhka lahayn, badankooduna madow yahay, sidaa awgeed wadaaddo, wasiirro, iyo imaamyo (haweenka qaarkood ee ka socda waddamada muslimiinta waxaa weheliyey rag). Sawirka ayaa ahaa mid cajiib ah oo guriga la keenay in tani ay ka mid tahay dhibaatooyinkeena. Meel kasta oo aad ku dhacdo arrimaha xuquuqda taranka, haweenku waxay xaq u leeyihiin inay ka qaybgalaan. In badan oo naga mid ah oo ka mid ah NGO-yada nabada la xidhiidha ayaa ka qayb qaadanayay waxa ku dhacaya kooxdan gaarka ah, maxaa yeelay qof kasta oo inaga mid ah ayaa si toos ah noogu mashquulsan arrimaha sida tooska ah noo khuseeya. Waxaan ku lug lahaa shirar badan oo ku saabsan hub ka dhigista iyo iska hor imaadyada hubeysan, halka kuwa kale ay ka shirayeen arrimo gaar ah oo ay ka walwalsanaayeen, halka kooxdan dharka madow xidhan ay ka shaqeynayeen sidii ay u ilaalin lahaayeen dhaqanka bulshada ee heerka labaad ee haweenka isla markaana ay u xaddidi lahaayeen codkooda arrimaha taranka. Qurxinta jinsiga iyo doorka ugu weyn ee jilayaasha diinta ee qolka kulanka ayaa ahaa mid cajiib ah.
U soo noqoshada dariiqooyinka diimaha kala geddisan, qiimeynta ayaa caan ku ah dhib. Ma haysaa wax aragti ah oo ku saabsan taas?
Su'aalaha aasaasiga ahi waa inay noqdaan "Ma shaqaysay?" Iyo "Maxaan ka baran karnaa?"
Kooxda ka shaqeysa Haweenka, Diinta, iyo Nabad-dhisidda waxay eegaysaa labadaba caqabadaha ballaadhan ee ka-qaybgalka haweenka si firfircoon iyo waxqabadyada muddada-gaaban ah. Maxaad u aragtaa habab wax ku ool ah?
Heer ballaaran, waxay waxtar weyn u leedahay Waaxda Arrimaha Dibadda inay muujiso xiisaha aragtida lamaanaha ee arrimaha nabadda, iyo sidoo kale habab wax ku ool ah oo ku aaddan diinta. Joogitaanka Mareykanka ee daafaha dunida wuxuu noqon karaa mid wanaagsan haddii dadkeennu ay aad ugu nugul yihiin waxa diintu uga dhigan tahay nolosha dadka, sida ay u saamayso dumarka si togan iyo si xunba, iyo sida ay aasaaska ugu tahay in badan oo ka mid ah aragtiyada adduunka ee ay tahay inaan la falgalno leh. Dabeecadda cilmaaniga ah ee bulshadeenna madaniga ahi waa nooc ka mid ah shilimaad laba dhinac ah, oo hal ku dheggu yahay waa in dad badani ay shaandheeyaan oo ayna u aqoonsanayn diinta mid ka mid ah isbeddellada waaweyn ee arrimaha adduunka. Waxaa la mid ah jagooyinka haweenka ee bulshada iyo doorkooda arrimaha diinta. Kuwani waa in lagu soo daro inay yihiin qodob muhiim u ah tababbarka dadka ka mid noqon doona kooxaha diblomaasiyadeed, ee aadaya dibedda iyadoo loo eegayo siyaasadda iyo metelaadda Mareykanka. Waa mowduuc aynaan in badan ka maqal.
Hal shay oo dadku u baahan yihiin inay ku eegaan fagaaraha ficillada haweenka ee waaxda dawliga ah iyo kala dambaynta bulshada ayaa ah mala-awaal in diintu tahay carqalad, marka loo eego kala qaybsanaanta iyo nacaybka galmada iyo xiriirka guud ee ay la leedahay barashada diinta. Taasi waa run, laakiin waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka eegno dhanka kale. Waa kuwee haweenka ku firfircoon diintooda bulshooyinka kuwaas oo sidoo kale firfircoon isku dayaya inay horumariyaan sinnaanta haweenka iyo qiyamka nabadeed ee wanaagsan ee bulshada dhexdeeda? Hababkani waxay had iyo jeer isugu yimaadaan nabad-dhisid. Xuquuqda haweenka caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqyada nabadeed waxaa jira u janjeera in la arko kaliya kala qaybsanaanta diimaha, taas oo noqon karta aragti gaaban oo caqabad ku noqon karta fursadaha wanaagsan ee diimaha ku saleysan ee nabadda iyo caddaaladda.
Waxaan ogaanay in haweenku si ballaadhan uga hadlaan qeexidda dhisidda nabadda.
Tani waa wax aan aragnay muddo dheer indha la'aanta ka jirta dhanka siyaasad dejiyeyaasha ayaa si gaar ah caan uga ah dhinacyada xiriirka caalamiga iyo adeegga diblomaasiyadda. Jaanqaadka jira ayaa ah in la kala saaro oo laga fekero nabadeynta kaliya marka la eego siyaasadaha, sidaas darteedna nabaddu tahay is waafajin siyaasadeed, halkii laga heli lahaa nabadda wanaagsan ee amniga aadanaha oo dhameystiran. Laakiin fahamka ballaadhan ee nabada ayaa had iyo jeer muhiimad weyn u lahaa nabadeynta haweenka, taas oo diiradda saareysa xaaladaha aadanaha iyo bulshada ee nabadda ka dhigaya. Macno yar ma samaynayso in taas loo kala saaro meelaha kale: tusaale ahaan, in loo arko horumarka inuu ka duwan yahay amniga.
Tani waa tabarucaad muhiim ah oo haweenku sameyn karaan. Haweenku waxay u muuqdaan inay leeyihiin aragti guud oo ku wajahan aagga oo dhan, taas oo ah, in dad badani ka badan yihiin dawlad-dhiska, iyada oo la tixgelinayo isbeddelada ballaaran. Marka tani ay tahay habka loo wajaho, natiijooyinka howlaha nabaddu waa kuwo aad u qoto dheer oo sidaas u sii waara oo waara.
Waa wax lala yaabo oo caadi ah in daraasadaha horumarinta iyo daraasadaha isku dhaca ay inta badan ku kala duwan yihiin jaamacadaha. Maxay tani ku timid?
Taasi run ayey ahayd muddo dheer, waana ognahay oo farta ku fiiqnay dhibaatada tobanaan sano. Dumar badan ayaa leh qeexitaan guud oo qeexan oo amniga ah oo aad uga baxsan fikirka aasaasiga ah ee badanaa la isticmaalo, in amniga loola jeedo in qaranku isku difaaci karo xoog milatari. Amniga barashada nabadda, iyo, waxaan ku doodi karaa, haweenka, macnaheedu waa buuxinta baahiyaha dadka iyo sidoo kale ilaalinta dhulka. Kala soocida qaybahaan amniga aadanaha waa dhaxal nasiib darro ah oo hore, cidhiidhi, anshax mideysan ah, oo looga soocayo aqoonta ku habboon dhinacyada kala duwan iyo anshaxyada wax looga qabanayo arrimaha khilaafka, nabadda iyo amniga.
Waxaad ka shaqeysay waxbarashada nabada sanado badan. Xagee ku aragtaa caqabadaha maanta jira?
Waxaan rajeynayaa in sanadaha soo socda, anigoo wali garanaya, in isbadal badan uu ku imaan doono garoonka. Waxa la isku haysto waa fikradda aasaasiga ah ee waxa ay tahay barashada bulshada iyo sida loo kobcin karo. Fahamkeyga ku wajahan habka loo baahan yahay wuxuu la mid yahay sidii uu waligiis ahaan jiray. Waxaan u arkaa inay asal ahaan ka soo jeedo ixtiraamka sharafta iyo madaxbanaanida bartaha, si markaa looga caawiyo horumarinta dareenka isfahamka bulshada, iyagoo leh aqoonta qofku u baahan yahay inuu noqdo xubin wax ku ool ah oo bulshada ka mid ah, haddii uu dhakhtar yahay ama tuubiste ama diblomaasi. Qeybta guud waxay ka guurtay inta badan ka hortagga dagaalka - asal ahaan waxay ka timid taban oo waxay u gudubtay nabad wanaagsan. Wax barashada nabada oo dhameystiran ayaa loo balaariyay qaab dhaqanka dhaqanka nabada. Fikirkaas iyo dariiqaas ayaa wali u baahan in horay loo sii riixo, laakiin isbedelku waa lama huraan.
Qeyb muhiim ah oo dhow, oo loogu yeero waxbarashada muhiimka ah ee nabadda, ayaa ku lug leh horumarinta awoodaha muwaadinimada ee ku lug leh xirfadaha muhiimka ah si loo fahmo loona hortago rabshadaha iyo caddaalad darrada iyo in laga shaqeeyo arrimaha bulshada iyo siyaasadeed ee lagu yareynayo fursadaha ay u leeyihiin rabshadaha iyo kordhinta kuwa xoojiya nabadeynta iyo nabadda -dhismaha hay'adaha. Waxaan ku baaqayaa in diiradda la saaro horumarinta xirfadaha oo ay ku jiraan xirfadaha isgaarsiinta iyo awoodaha lagu aqoonsado xaddidaadda aragtida qofka.
Waxa aan hadda u baahanahay waa inaan ka tarjumno wax ku oolka waxbarashada nabadda. Mararka qaarkood xirfadlayaashu waxay noqdaan milicsiga waxa ay raadinayaan inay ka adkaadaan, u doodayaasha fikradda caqabad ku ah baaritaanka furan ee furan ee lagama maarmaanka u ah waxbarashada nabadda ee wax ku oolka ah. Waxaan u baahanahay inaan xasaasiyad badan u yeelano suurtagalnimadaas.
Iskusoo wada duuboo, waxaan ubaahanahay inaan udiyaarino dadka inay sifiican ula macaamilaan doodaha, hadalka siyaasadeed ee burburka ah ee maanta aad ugu baahay. Waxaan u baahanahay inaan leenahay qaab nabadeed oo barasho ah oo ku saabsan barashada diimaha kale iyo nidaamyada caqiidada ee lagu wareejin karo siyaasada. Dadku waxay leeyihiin caqiidooyin siyaasadeed oo ka soo baxa caqiidooyinka qoto dheer ee laga aaminsan yahay aadanaha iyo bulshada. Waxaan u baahannahay inaan waxbarno si loo fahmo fahamka nidaamyada caqiidooyinka kala duwan ee la isku haysto oo ah qayb ka mid ah qaybaha guud ee waxbarashada. Qaar ka mid ah dadka goobta jooga waxay bilaabayaan inay diirada saaraan xirfadaha hadalka dadweynaha ee ku saabsan farqiga. Waxay u baahan tahay inay ku lug lahaato ixtiraamka sharafta aadanaha ee kan kale, iyadoo aan la raadinaynin in laga dhaadhiciyo ama laga adkaado midka kale, laakiin, kan kale, si loo dhiso xaqiiqo cusub oo faa'iido wada leh. Waxaan rajeynayaa in dadku ka fikirayaan taas. Aniga qudhaydu waxaan rabaa in aan ka qabto shaqada hanaan dheeri ah mawduuca, si ka sii badan wixii aan soo aragnay sanadkii la soo dhaafay; Wadahadalkeena siyaasadeed ee soo kordhaya ee dalka Mareykanka waa wax iska cad in aanan laheyn xirfado aan ugu baahanahay in aan si wax ku ool ah wax uga qabano kala duwanaanshaha.
Heer waxbarasheed intee le'eg ayaad u malaynaysaa in waxbarista noocan ahi ay tahay tan ugu baahida badan uguna waxtarka badan?
Waxaa loo baahan yahay marxalad kasta. Meel kasta iyo marxalad kasta waxay leedahay wax gaar ah oo quudinaya bulsho aqoon leh. Laakiin waxaan marwalba dareemay in marka la eego su'aalahan wada hadalka dadweynaha heerka ugu xasaasiga ahi yahay dugsiga sare ee dadweynaha, gaar ahaan labada sano ee hore. Taasi waa meesha aad ku gaari karto tirada ugu badan ee muwaadiniinta mustaqbalka.
Diintu ma muujineysaa nooca waxbarasho ee aad u doodayso?
Waxaan la hadlay saaxiibo ka socda dalal kale, halkaas oo diinta lagu barto iskuulada dadweynaha, ma ahan wax ku saabsan caqiidada laakiin waa mawduuc ku saabsan adduunka aad ku nooshahay. Halkaas waxaa loo arkaa inay qayb ka tahay waxaad u baahan tahay inaad ogaato inaad u shaqeyso sidii muwaadin aduunka masuul ka ah. Fahankaas diinta waa inuu barbar socdaa waxbarashada dhaqamada badan. Ardaydu waa inay ka soo baxaan dugsiga sare iyagoo og kaliya maahan in meelaha qaar ee adduunka ay ugu horreeyaan Masiixiyiin ama Muslim ama raacsan caqiidooyin kale, laakiin waxa loola jeedo marka loo eego sida dadkaasi u arkaan adduunka. Maxay tahay saameynta ay rumeysan yihiin, sida ay noo arkaan, iyo sida aaminsanaantayada ay u saameyneyso xiriirka aan la leenahay adduunka intiisa kale inay udub dhexaad u noqoto baaritaanka lagu raadinayo waxbarashada adduunka iyo nabadda.
Dulqaad la’aan baahsan ayaa inta badan ah arrin jahli ah. Waxaan u arkaa inay taasi tahay mid la mid ah kuwa xagjiriinta ah ee aan rumaysadka lahayn iyo sidoo kale kuwa haysta iimaan diimeed gaar ah. Tan waxaan dhihi lahaa xitaa hadaanan ahayn ku celcelis Episcopalian: mowqifka gardarrada ah ee qaar ka mid ah aqoonyahanada cawaan laawayaasha ah ayaa sidoo kale wax u dhimaya sida mowqifka qaar ka mid ah kuwa diinta aasaasiga u ah. Waa nooca dulqaad la'aanta ay tahay in waxbarashada aasaasiga ahi ay isku daydo inay ka gudubto. Dhamaanteen waxaan u baahanahay inaan si dhab ah u fahano dabeecada caqiidooyinkeena aasaasiga ah, si aan uga indho yareyn sida ay taasi u saameyneyso doorarkeena muwaadin ahaan. Waxaan u baahanahay inaan isweydiino waxa aasaasiga u ah Masiixikeena ama Muslimka ama Yuhuudda ama aragti kasta oo diimeed oo ku habboon hadalka guud iyo sidee baan uga fogaan karnaa suurtagalnimada in aasaasigaasi uu ku xadgudbi karo kuwa diimaha kale.
Miyaad aragtay tusaalooyinka meesha tan si fiican loogu qabtay?
Laga yaabee Australia, in kasta oo wixii aan arkay dib u soo laabtay. Saaxiibkiis oo aaday seminar wuxuu u shaqo tagay barashada bulshada isagoo bare diin ah - ma ahan inuu ardayda ka bilaabo caqiido, laakiin inuu barto nuxurka diimaha kala duwan ee la aaminsan yahay iyo ku dhaqanka bulshada. Tacliintaas badiyaa waxay ku saabsaneyd dhaqanno ciriiri ah oo cidhiidhi ah, oo ka bilaabma Brotestanka iyo Kaatooligga, mararka qaarkood diimaha kale. Waxaan soo ururiyey inay la kulmeen dhibaatooyin qaar ka mid ah waxbariddii si dhab ah oo ku saabsan waxa ay aaminsan yihiin dadka asaliga ah. Laakiin ujeedku waxa weeye in diinta maaddo ahaan ay qayb muhiim ah ka tahay manhajka lagu barayo dhammaan muwaadiniinta.
Laakiin waxa ugu muhiimsan ee ah in la fahmo ayaa ah in qofku wax ka bari karo waxyaabaha la rumaysan yahay iyada oo aan la marin. Dalka Mareykanka, waxa ay u baahan tahay waa fiirinta waxbarashada dadweynaha iyo sida ku filan ama aan ugu filneyn inay ugu diyaar garowdo barayaasha inay si wax ku ool ah ula macaamilaan nooca jaahilnimada iyo dulqaad la'aanta khilaafaadka aan aragno ee ka dhex muuqda khudbaddeenna dadweynaha. Sidee runti aqoonta diinta ugu kordhin kartaa dad aqoon sare leh?
Su'aashan akhris-qorista diintu waa muhiim laakiin way adagtahay: maxaa lagu darayaa? Miyaad haysaa tusaalooyin wanaagsan?
Dhibaatadu waxay tahay in ay yar yihiin haddii ay jiraan tusaalooyin wanaagsan. Waa inaan iyaga sameysanaa.
Ugu dambeyntiina, sideed u qeexi lahayd waxbarashada nabadda maanta? Ma beerbaa mise waa edbin?
Waa maskaxdayda goob, ma aha edbinta, in kasta oo meelo badan maanta laga barto barashada nabadda, oo ka duwan waxbarashada nabadda, waxaa loo aqbalaa anshax ahaan.
Waxbarashada nabada waa mid wajiyo badan oo edaabeed. Waxay diiradda saaraysaa dhibaatada dhexe ee dhibaatada ee noocyadeeda kala duwan. Isku dhaca hubaysan, rabshadaha dhismaha, ku xadgudubka jinsiga, iyo dulqaad la'aanta bulshada, dhaqanka, iyo diinta ee inta badan keenta rabshadaha dhaqanka ayaa ka mid ah qaybaha goobta. Waxaa loo baahan yahay in si cad loo fahmo in rabshadaha kiisaska badankood ay yihiin xulasho. Waxa aan u baahanahay inaan awoodno inaan sameyno ayaa ah inaan horumarino jaangooyooyin dabeecado iyo dabeecado ka dhigaya rabshadaha hab aan macquul aheyn oo soo jiidasho yar oo lagu gaaro himilooyinka siyaasadeed iyo bulsho. Tani macnaheedu waa barashada rabshadaha, laakiin sidoo kale soo qaadashada arrinta maadaama ay kuxirantahay dhinacyo kala duwan oo daraasado ah. Labada mushkiladood ee keli ah iyo dhibaatooyinka kala geddisan labadaba waa ansax, oo labaduba wax bay dhisi karaan. Si kasta oo ay tahayba, ka gudubka rabshaduhu waxay u baahan yihiin inay noqdaan hadaf muhiim ah oo xagga waxbarashada ah, iyadoo muhiim u ah ogaanshaha waxyaabaha qaarkood ee ku saabsan caafimaadka bulshada. Si la mid ah sida loo baran karo in fursadaha cudurka kansarka sanbabada looga hortagi karo iyadoo aan la cabbin sigaar, waxaa la baran karaa isku dhacyada hubeysan waxaa looga hortagi karaa iyadoo loo marayo habab gaar ah oo lagu xaliyo khilaafaadka iyo in gacmo yar la yeesho marka fikradahaagu kaa dhammaadaan. . Ku guuleysiga xirfado badan oo isku dhaca ah iyo yareynta hubka waa laba dariiqo oo lagama maarmaan u ah ka guuleysiga rabshadaha.
Dhaqannada waxbarashada nabadda labadaba waa edbin edbin iyo edbin ah. Mid ka mid ah waxyaabaha aan u baahanahay waa inaan barano midba midka kale luuqadiisa aqooneed iyo inaan u nuglaado marka dadka kale ee aan ku sheekaysanayno aysan fahmin luuqada. Habdhaqanka ka saarida noocaas ah ayaa ku badan akadeemiyada. Anshaxu mararka qaar ficil ahaan waa farsamo kale oo ka saarista ah.
Dhaqaalaha aniga aragtidayda waa tusaale caadi ah. Wasiir maaliyadeed Iswiidhan ayaa mar u kuur galay in hadii uu awoowe u sharixi karin ayeeyadiis dib u habaynta cashuuraha uu ku guuldareystay.
Taasi waa wasiir maaliyad caqli badan! Laakiin tani sidoo kale waa arrin lab iyo dheddig ah, maxaa yeelay haween badan ayaa ku dhex jira bulshada si ay uga baqaan tirooyinka. Way na dhaawici karaan oo waxay noqon karaan qalab laga saaro. Muddo dheerna tirakoobku wuxuu ahaa ansaxinta kama dambaysta ah. Tani waa nooc eexasho ay adag tahay in laga takhaluso.
Sidee ku timid wadadan? Dhowr qoraal oo kama dambeys ah!
Waxaan ahaa ilmo Dagaalkii Labaad ee Adduunka waxaanan si xeel dheer uga war helay xitaa markaa nacasnimada buuxda ee shirkadda. Halkaas ayaana ka koray xiisihii aan u qabay arrimaha dagaalka iyo nabadda! Ka macallin ahaan, waxaan aad u xiiseeyey barashada cilmiga. Waxaanan gartay in arrimaha sida amniga oo kale ay tahay in lagu dhex arko nidaamyada iyo wacyigalinta qotoda dheer ee duruufaha taariikhiga ah. Waxaan sidoo kale ku soo koray waqti ay jirtay aragti guud oo ahayd "haweenku runtii ma fahmi karaan waxyaalahan." Halkaas waxaa ka koray xukun ah in fahamka aragtida qof kale ay tahay heerka koowaad ee barashada nabadaynta. Waxbarashada nabada waxay kuxirantahay dhamaan dhinacyada, maadaama ay ubaahantahay aragti dhammaystiran iyo rabitaan ah in si xushmad leh loola macaamilo kuwa kale iyo in laga wada shaqeeyo fikradaha wanaagsan iyo qaababka ugufiican ee wax looga qabto dhibaatooyinkeena guud.
# nabad dhisida
# diin & cibaado
Gudaha Kacaankii Sheeko-qorista
Is dhexgalka Aragtida Waxbarashada ee Xafiiska Nabada Caalamiga ee Golaha Koongareeska 2016
UNESCO waxay raadinaysaa Sarkaalka Sare ee Mashruuca (jinsiga iyo waxbarashada)
Musharraxu wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loo horumarin lahaa hirgelinta Istaraatiijiyadda UNESCO ee Sinnaanta Jinsiga ee gudaha iyo iyada oo loo marayo Waxbarashada iyo Waxbarashada UNESCO, Qorshahayaga Mustaqbalka. [sii wad akhriska…]
3-sano barnaamijka barashada nabadda ayaa lasoo gabagabeeyay (Rwanda)
June 21, 2016 Warbixinnada Waxqabadka 0
Ka dib seddex sano ka dib dhisida nabad waarta oo ka jirta bulshada guud ahaan dalka, Barnaamijka Waxbarashada Nabadda ee Rwanda (RPEP) ayaa soo dhowaanaya. RPEP waxay gaartey in kabadan 50,000 oo qof oo ka kala socda in ka badan 20 degmo oo ku baahsan dalka Rwanda iyaga oo kor u qaadaya qiyamka wanaagsan oo ay ka mid yihiin wadajirka bulshada, wadajirka iyo masuuliyada shakhsiyadeed, isu damqashada, fikirka xasaasiga ah iyo ficilka lagu dhisayo bulsho nabdoon. [sii wad akhriska…]
Aqoonyahanada Kulliyadaha Bulshada ayaa ku shiray Alexandria, VA si ay wax uga bartaan Colaada Caalamka iyo Nabadeynta
November 9, 2016 Warbixinnada Waxqabadka 0
Seminaarkii 4aad ee Sannadlaha ahaa ee Kulleejada Bulshada ee Nabadda waxaa lagu qabtay Oktoobar 21-24 Oktoobar Virginia Community College oo ku taal Alexandria, VA. Seminaarka waxaa loogu talagalay in lagu dhiso awooda kuliyadaha bulshada si loo baro barashada nabada, xalinta khilaafaadka, arimaha caalamka, xuquuqda aadanaha, iyo mowduucyada la xiriira. Seminaarkani waa aqoon-isweydaarsiga keliya ee heer qaran ee loo qabto barayaasha kuleejka bulshada ee diiradda saaraya arrimaha caalamiga iyo nabad-dhisidda. [sii wad akhriska…]
Bandhigga Nabadda ee Edmonton wuxuu leeyahay,
May 3, 2016 at 1: am 26
Betty Reardon waa awood layaableh oo isbedel ah waxayna wax badan ka qabatay horumarinta waxbarashada nabada.